၂၁ – အတ္ထိပစ္စယော Atthi Paccayo (Presence condition) (5 of 8) – Dhamma Training Center
၂၁ – အတ္ထိပစ္စယော Atthi Paccayo (Presence condition) (5 of 8)
အတ္ထိပစ္စည်းဟူသည် ထင်ရှားရှိပြီး ကျေးဇူးပြုသည့် ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းဆိုပါက Presence condition အဖြစ် ကျေးဇူးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းတရားတို့လည်း ထင်ရှားရှိနေပြီး အကျိုးပြုမည့် တရား ကလည်း ထင်ရှားရှိနေသည့်ပစ္စည်းကို အတ္ထိပစ္စည်းဟုခေါ်သည်။ ရှိနေခိုက်တွင် ကျေးဇူးပြုပါက အတ္ထိပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၊ မရှိတော့မှသာ ကျေးဇူးပြုပါက နတ္ထိပစ္စည်း ဖြစ်သည်။
အတ္ထိပစ္စည်းသည် ခဏိကပစ္စုပ္ပန်အနေအားဖြင့် မိမိထင်ရှားရှိခိုက် မိမိကဲ့သို့ ထင်ရှားရှိနေသည့် တရားအား ထောက်ပံ့သမှု ကျေးဇူးပြုသည့် ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မြေကြီး၊ မြင့်မိုရ်တောင် ဟိမ၀န္တာတောင်တို့သည် မိမိတို့ထင်ရှားရှိခိုက် မိမိအပေါ် ပေါက်ရောက်နေကြသည့် ထိုထိုသစ်ပင် စသည်တို့အား သြဇာထက်မြက်စေရန် လည်းကောင်း၊ စိမ်းလန်း စိုပြေ ရှင်သန်စေရန်လည်းကောင်း ထောက်ပံ့သောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုကြပါသည်။
ဤအတ္ထိပစ္စည်းတွင် ဇနကသတ္တိနှင့် ဥပထမ္ဘက သတ္တိဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ၏။ ဥပါဒ်အခိုက် ဘင်အခိုက်တွင် ထိုပစ္စည်း ထင်ရှားရှိနေသော်လည်း ဖြစ်နေခိုက် ပျက်နေခိုက် ဖြစ်သောကြောင့် မထင်ရှားပါ။ ဌီအခိုက်၌မူ ပို၍ ထင်ရှားသဖြင့် ဇနကသတ္တိရှိသော်လည်း ဥပထမ္ဘကသတ္တိက ပြဋ္ဌာန်းကြောင်း မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ကြီးမှ မိန့်တော်မူပါသည်။
အတ္ထိပစ္စည်း၏ သင်္ချာမှာ – ၁၃ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ‘အတ္ထိယာ တေရသ’ ဟု မှတ်သားနိုင်ပါသည်။
ထိုသင်္ချာကို အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ကုသလ ဓမ္မာ သင်္ချာ-၃
အကုသလ ဓမ္မာ သင်္ချာ-၃
အဗျာကတ ဓမ္မာ သင်္ချာ-၃
(၁) ဗျာ-ဗျာ (၂) ဗျာ-ကု (၃) ဗျာ-အကု
ကုသလ ဗျာကတ သင်္ချာ -၂
(၁) ကု-ဗျာ-ကု (၂) ကု-ဗျာ-ဗျာ
အကုသလ ဗျာကတ သင်္ချာ -၂
(၃) အကု-ဗျာ-အကု (၄) အကု-ဗျာ-ဗျာ
အတ္ထိနှင့် အ၀ိဂတ အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက်
‘အတ္ထိ’ သဒ္ဒါသည် ‘ထင်ရှားရှိနေခြင်း’ အနက်ကို ဟော၏။ ထင်ရှားရှိသည်ဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သော သတ္တိသည် အတ္ထိပစ္စည်းမည်၏။ ထို့ကြောင့် အတ္တိပစ္စည်း၌ ပစ္စည်း ပစ္စယုပ္ပန် တရားနှစ်မျိုးလုံးပင် ပစ္စုပ္ပန်အခိုက်၌ (၀ါ) ကျေးဇူးပြုခိုက်၌ ထင်ရှားရှိနေရမည်။ ‘ပစ္စုပ္ပန်အခိုက်၌ ထင်ရှားရှိနေရမည်’ ဟူသည် ဥပါဒ် (ဖြစ်) အခိုက်မှာ ဖြစ်စေ၊ ဌီ (တည်) အခိုက်မှာဖြစ်စေ၊ ဘင် (ပျက်) အခိုက်မှာဖြစ်စေ ခဏသုံးပါးလုံး၌ ထင်ရှားနေရမည်ဟု ဆိုလို သည်။
‘အ၀ိဂတ’ ပစ္စည်းသည် အတ္ထိပစ္စည်းနှင့် (ပစ္စည်း၊ ပစ္စယုပ္ပန်) တရားကိုယ် အရကောက်အားဖြင့် အားလုံး တူညီသည်။ အ၀ိဂတပစ္စည်း၏ သဘောသည် အတ္ထိပစ္စည်း၏ သဘောကို အဓိပ္ပါယ်ရှင်းပြရာ၌ များစွာ အထောက် အကူပြုသဖြင့် ဤပစ္စည်းနှစ်ခု၏ သဘောအဓိပ္ပါယ်ကို ပေါင်း၍ လေ့လာက ပို၍ အကျိုးရှိပေသည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်လည်း – ပရမတ္ထအထည်ကိုယ် ထင်ရှားရှိနေသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုတတ်သော သတ္တိကို အတ္ထိပစ္စည်းဟု ခေါ်၍၊ ပရမတ္ထသဘောမှ မကင်းမချုပ်သေးသောအားဖြင့် (၀ါ) မကွေမကွာ ပစ္စုပ္ပန် ရှိနေဆဲ အဖြစ်ဖြင့် ကျေးဇူးပြုတတ်သော သတ္တိကို အ၀ိဂတပစ္စည်းဟုခေါ်သည်။ ဤသို့လျှင် ဤပစ္စည်း နှစ်ခုအနက်၊ တစ်ခု၏ သဘောအဓိပ္ပာယ်က အခြားတခု၏ သဘောအဓိပ္ပာယ် ထပ်ဆင့်ရှင်းပြဘိသကဲ့သို့ ရှိလေသည်။
ပစ္စည်းသဘောကို ဥပမာပေးရာ၌လည်း အ၀ိဂတပစ္စည်းကို မဟာသမုဒ္ဒရာနှင့် တူ၏ဟု ရှေးဆရာတို့ ဥပမာပြကြ၏။ မဟာသမုဒ္ဒရာသည် မိမိ၌တည်ရှိသော ငါး လိပ် စသည်တို့အား မိမိမကင်းသေး၊ မကုန်ခန်းသေး သမျှ အေးအေးမြမြ တည်နေနိုင်ကြဖို့ရာ ကျေးဇူးပြုသကဲ့သို့ ထို့အတူပင် အ၀ိဂတပစ္စည်းသည်လည်း မိမိ မကင်းသေး၊ မချုပ်ပျောက်သေးသည်၏အဖြစ်ဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အတ္ထိပစ္စည်း၌ မြေကြီးနှင့် သစ်ပင် (ပစ္စည်းနှင့် ပစ္စယုပ္ပန်) နှစ်ဘက်လုံး ထင်ရှားရှိနေကြမှသာ ကျေးဇူးပြုနိုင်သကဲ့သို့ ဤအ၀ိဂတ ပစ္စည်း၌ လည်း မဟာသမုဒ္ဒရာနှင့် ငါးလိပ်ပစ္စည်းနှင့် ပစ္စယုပ္ပန်နှစ်ဘက်လုံး မပျက်သုဉ်းကြသေးသောအခါမှသာ ကျေးဇူး ပြုနိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အတ္ထိပစ္စည်းနှင့် အ၀ိဂတ ပစ္စည်းနှစ်ခုတို့သည် ပစ္စည်း, ပစ္စယုပ္ပန် ကျေးဇူးပြုပုံအားဖြင့် လုံးဝ တူနေသည် သာမက၊ သဘောသတ္တိ အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်လည်း တူနေပါသည်။ (ညွှန်း- ဦးမြင့်ဆွေ၏ ပဋ္ဌာန်းမဟာ)
အ၀ိဂတပစ္စည်းနှင့် အတ္ထိပစ္စည်းက သဘောချင်းတူညီ
အကျိုးအကြောင်း တူတကွဖြစ်ပါက = သဟဇာတပစ္စည်း။
အကျိုးမဖြစ်ထွန်းမီ ကြိုတင်ဖြစ်ပါက = ပုရေဇာတပစ္စည်း။
အကျိုးပစ္စယုပ္ပန်တရား ဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာ အကြောင်းပစ္စည်းတရားက မချုပ်ပျောက်သေးဘဲ ကျေးဇူး ပြုသည့်ပစ္စည်းက = အတ္ထိပစ္စည်း။
တစ်နည်းအားဖြင့် အကျိုးတရားဖြစ်နေချိန်၌ပင် အကြောင်းတရားက မကင်းမကွာ ကျေးဇူးပြုနေ သောကြောင့် = အ၀ိဂတပစ္စည်း။
အ၀ိဂတပစ္စည်းနှင့် အတ္ထိပစ္စည်းက သဘောချင်းတူပါသည်။
‘ဖြစ်စေ၊ တည်စေ ဤနှစ်ထွေ ခေါ်လေကျေးဇူးပြု’
ဖြစ်စေသည်ကို ‘ကျေးဇူးပြုတာ’ = ဇနကသတ္တိ Producing cause.
တည်စေသည်ကို ‘ကျေးဇူးပြုတာ’ = ဥပတ္ထမဧကသတ္တိ Supporting cause.
အတ်ထိပစ်စညျးဟူသညျ ထငျရှားရှိပွီး ကြေးဇူးပွုသညျ့ ပစ်စညျးဖွဈပါသညျ။ တဈနညျးဆိုပါက Presence condition အဖွဈ ကြေးဇူးပွုခွငျးဖွဈသညျ။ အကွောငျးတရားတို့လညျး ထငျရှားရှိနပွေီး အကြိုးပွုမညျ့ တရား ကလညျး ထငျရှားရှိနသေညျ့ပစ်စညျးကို အတ်ထိပစ်စညျးဟုချေါသညျ။ ရှိနခေိုကျတှငျ ကြေးဇူးပွုပါက အတ်ထိပစ်စညျးဖွဈပွီး၊ မရှိတော့မှသာ ကြေးဇူးပွုပါက နတ်ထိပစ်စညျး ဖွဈသညျ။
အတ်ထိပစ်စညျးသညျ ခဏိကပစ်စုပ်ပနျအနအေားဖွငျ့ မိမိထငျရှားရှိခိုကျ မိမိကဲ့သို့ ထငျရှားရှိနသေညျ့ တရားအား ထောကျပံ့သမှု ကြေးဇူးပွုသညျ့ ပစ်စညျးဖွဈပါသညျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ မွကွေီး၊ မွငျ့မိုရျတောငျ ဟိမဝန်တာတောငျတို့သညျ မိမိတို့ထငျရှားရှိခိုကျ မိမိအပျေါ ပေါကျရောကျနကွေသညျ့ ထိုထိုသဈပငျ စသညျတို့အား သွဇာထကျမွကျစရေနျ လညျးကောငျး၊ စိမျးလနျး စိုပွေ ရှငျသနျစရေနျလညျးကောငျး ထောကျပံ့သောအားဖွငျ့ ကြေးဇူးပွုကွပါသညျ။
ဤအတ်ထိပစ်စညျးတှငျ ဇနကသတ်တိနှငျ့ ဥပထမ်ဘက သတ်တိဟူ၍ နှဈမြိုးရှိ၏။ ဥပါဒျအခိုကျ ဘငျအခိုကျတှငျ ထိုပစ်စညျး ထငျရှားရှိနသေျောလညျး ဖွဈနခေိုကျ ပကျြနခေိုကျ ဖွဈသောကွောငျ့ မထငျရှားပါ။ ဌီအခိုကျ၌မူ ပို၍ ထငျရှားသဖွငျ့ ဇနကသတ်တိရှိသျောလညျး ဥပထမ်ဘကသတ်တိက ပွဋ်ဌာနျးကွောငျး မူလပဋ်ဌာနျးဆရာတျောကွီးမှ မိနျ့တျောမူပါသညျ။
အတ်ထိပစ်စညျး၏ သင်ျခြာမှာ – ၁၃ ဖွဈပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ‘အတ်ထိယာ တရေသ’ ဟု မှတျသားနိုငျပါသညျ။
ထိုသင်ျခြာကို အောကျပါအတိုငျး လလေ့ာနိုငျပါသညျ။
အဗြာကတ ဓမ်မာ သင်ျခြာ-၃
ကုသလ ဗြာကတ သင်ျခြာ -၂
(၁) ကု-ဗြာ-ကု (၂) ကု-ဗြာ-ဗြာ
အကုသလ ဗြာကတ သင်ျခြာ -၂
(၃) အကု-ဗြာ-အကု (၄) အကု-ဗြာ-ဗြာ
အတ်ထိနှငျ့ အဝိဂတ အဓိပ်ပါယျရှငျးလငျးခကျြ
‘အတ်ထိ’ သဒ်ဒါသညျ ‘ထငျရှားရှိနခွေငျး’ အနကျကို ဟော၏။ ထငျရှားရှိသညျဖွဈ၍ ကြေးဇူးပွုတတျသော သတ်တိသညျ အတ်ထိပစ်စညျးမညျ၏။ ထို့ကွောငျ့ အတ်တိပစ်စညျး၌ ပစ်စညျး ပစ်စယုပ်ပနျ တရားနှဈမြိုးလုံးပငျ ပစ်စုပ်ပနျအခိုကျ၌ (ဝါ) ကြေးဇူးပွုခိုကျ၌ ထငျရှားရှိနရေမညျ။ ‘ပစ်စုပ်ပနျအခိုကျ၌ ထငျရှားရှိနရေမညျ’ ဟူသညျ ဥပါဒျ (ဖွဈ) အခိုကျမှာ ဖွဈစေ၊ ဌီ (တညျ) အခိုကျမှာဖွဈစေ၊ ဘငျ (ပကျြ) အခိုကျမှာဖွဈစေ ခဏသုံးပါးလုံး၌ ထငျရှားနရေမညျဟု ဆိုလို သညျ။
‘အဝိဂတ’ ပစ်စညျးသညျ အတ်ထိပစ်စညျးနှငျ့ (ပစ်စညျး၊ ပစ်စယုပ်ပနျ) တရားကိုယျ အရကောကျအားဖွငျ့ အားလုံး တူညီသညျ။ အဝိဂတပစ်စညျး၏ သဘောသညျ အတ်ထိပစ်စညျး၏ သဘောကို အဓိပ်ပါယျရှငျးပွရာ၌ မြားစှာ အထောကျ အကူပွုသဖွငျ့ ဤပစ်စညျးနှဈခု၏ သဘောအဓိပ်ပါယျကို ပေါငျး၍ လလေ့ာက ပို၍ အကြိုးရှိပသေညျ။
တဈနညျးအားဖွငျ့လညျး – ပရမတ်ထအထညျကိုယျ ထငျရှားရှိနသေောအားဖွငျ့ ကြေးဇူးပွုတတျသော သတ်တိကို အတ်ထိပစ်စညျးဟု ချေါ၍၊ ပရမတ်ထသဘောမှ မကငျးမခြုပျသေးသောအားဖွငျ့ (ဝါ) မကှမေကှာ ပစ်စုပ်ပနျ ရှိနဆေဲ အဖွဈဖွငျ့ ကြေးဇူးပွုတတျသော သတ်တိကို အဝိဂတပစ်စညျးဟုချေါသညျ။ ဤသို့လြှငျ ဤပစ်စညျး နှဈခုအနကျ၊ တဈခု၏ သဘောအဓိပ်ပာယျက အခွားတခု၏ သဘောအဓိပ်ပာယျ ထပျဆငျ့ရှငျးပွဘိသကဲ့သို့ ရှိလသေညျ။
ပစ်စညျးသဘောကို ဥပမာပေးရာ၌လညျး အဝိဂတပစ်စညျးကို မဟာသမုဒ်ဒရာနှငျ့ တူ၏ဟု ရှေးဆရာတို့ ဥပမာပွကွ၏။ မဟာသမုဒ်ဒရာသညျ မိမိ၌တညျရှိသော ငါး လိပျ စသညျတို့အား မိမိမကငျးသေး၊ မကုနျခနျးသေး သမြှ အေးအေးမွမွ တညျနနေိုငျကွဖို့ရာ ကြေးဇူးပွုသကဲ့သို့ ထို့အတူပငျ အဝိဂတပစ်စညျးသညျလညျး မိမိ မကငျးသေး၊ မခြုပျပြောကျသေးသညျ၏အဖွဈဖွငျ့ ကြေးဇူးပွုသညျဟု ဆိုလိုသညျ။ အတ်ထိပစ်စညျး၌ မွကွေီးနှငျ့ သဈပငျ (ပစ်စညျးနှငျ့ ပစ်စယုပ်ပနျ) နှဈဘကျလုံး ထငျရှားရှိနကွေမှသာ ကြေးဇူးပွုနိုငျသကဲ့သို့ ဤအဝိဂတ ပစ်စညျး၌ လညျး မဟာသမုဒ်ဒရာနှငျ့ ငါးလိပျပစ်စညျးနှငျ့ ပစ်စယုပ်ပနျနှဈဘကျလုံး မပကျြသုဉျးကွသေးသောအခါမှသာ ကြေးဇူး ပွုနိုငျသညျ။
မညျသို့ပငျဖွဈစေ အတ်ထိပစ်စညျးနှငျ့ အဝိဂတ ပစ်စညျးနှဈခုတို့သညျ ပစ်စညျး, ပစ်စယုပ်ပနျ ကြေးဇူးပွုပုံအားဖွငျ့ လုံးဝ တူနသေညျ သာမက၊ သဘောသတ်တိ အဓိပ်ပာယျအားဖွငျ့လညျး တူနပေါသညျ။ (ညှနျး- ဦးမွငျ့ဆှေ၏ ပဋ်ဌာနျးမဟာ)
အဝိဂတပစ်စညျးနှငျ့ အတ်ထိပစ်စညျးက သဘောခငျြးတူညီ
အကြိုးအကွောငျး တူတကှဖွဈပါက = သဟဇာတပစ်စညျး။
အကြိုးမဖွဈထှနျးမီ ကွိုတငျဖွဈပါက = ပုရဇောတပစ်စညျး။
အကြိုးပစ်စယုပ်ပနျတရား ဖွဈပျေါနခြေိနျမှာ အကွောငျးပစ်စညျးတရားက မခြုပျပြောကျသေးဘဲ ကြေးဇူး ပွုသညျ့ပစ်စညျးက = အတ်ထိပစ်စညျး။
တဈနညျးအားဖွငျ့ အကြိုးတရားဖွဈနခြေိနျ၌ပငျ အကွောငျးတရားက မကငျးမကှာ ကြေးဇူးပွုနေ သောကွောငျ့ = အဝိဂတပစ်စညျး။
အဝိဂတပစ်စညျးနှငျ့ အတ်ထိပစ်စညျးက သဘောခငျြးတူပါသညျ။
‘ဖွဈစေ၊ တညျစေ ဤနှဈထှေ ချေါလကြေေးဇူးပွု’
ဖွဈစသေညျကို ‘ကြေးဇူးပွုတာ’ = ဇနကသတ်တိ Producing cause.
တညျစသေညျကို ‘ကြေးဇူးပွုတာ’ = ဥပတ်ထမဧကသတ်တိ Supporting cause.